ब्राह्मण समुदायबाट सेनामा भाग्यमानी जर्नेलको नेतृत्वः पूरा होला त परिवर्तनको अपेक्षा ? « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०७८, शुक्रबार ११:०६
१५ साउन, काठमाडौं । आउँदो साउन २६ गतेबाट नेपाली सेनाले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ । सेनाको परम्परा अनुसार अवकाश हुनु एक महिना अघि घर बिदा बसेर नयाँ प्रमुखलाई काम गर्न सहज बनाउने र जिम्मेवारी सिकाउने गरिन्छ । त्यही परम्परामा टेकेर प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा साउन २६ बाट बिदामा बसेपछि नयाँ प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
हालका प्रधानसेनापति थापाले आफ्नो कार्यकालको १ हजार दिन पुगेको अवसरमा २३ जेठमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रकृया शुरु भएको र आफू आजैबाट नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सिकाउने भनेर घोषणा गरेका थिए । त्यही दिन थापाले आफुपछिको नेपाली सेनाको कमाण्ड बालाधिकृत रथी प्रभुराम शर्माले गर्ने बताएका थिए । थापाको सिफारिसमा नै बालाधिकृत रथी शर्मालाई २६ साउनदेखि कायममुकायम प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।
१२ साउन (मंगलबार) मा बसेको मन्त्रिपरिषदकाे बैठकले बालाधिकृत रथी शर्मालाई २६ साउनदेखि कायममुकायम प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेपछि शर्मा नेपाली सेनाको इतिहासमा पहिलो पटक ब्राह्मण समुदायबाट प्रधानसेनापति हुन लागेका हुन् । यसअघि राणा, थापा, बस्नेत, क्षेत्री, गुरुङमात्रै प्रधानसेनापति भएका थिए । युद्ध कार्य महानिर्देशकको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरेका शर्मा नेपाली सेनाको ४४ औं प्रधानसेनापति हुनेछन् ।
सैनिक ऐन अनुसार सेनाप्रमुखको तीन वर्षे पदावधि पूरा गरेर प्रधानसेनापति थापा २४ भदौमा अनिवार्य अवकाश हुनेछन् । निकै शालिन र भद्र स्वभावका शर्मा आफ्नो जिम्मेवारीलाई सधै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने सैनिक अधिकारी हुन् ।
को हुन् नयाँ प्रधानसेनापति ?
भाग्यमा भएपछि कसैको केही लाग्दैन भन्ने नेपाली उखान शर्मालाई लागु हुन्छ । तत्कालिन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङको पालामा नै महासेनानी रतीन्द्र खत्रीको म्याद थप नभएपछि उनकै ब्याची शर्मा भावी प्रधानसेनापति बन्ने निश्चित भएको थियो । यदि खत्रीको म्याद थपिएको भए शर्माकाे स्थानमा खत्री प्रधानसेनापति हुन्थे ।
नेपाली सेनाभित्र सहयोगी र मिलनसार जर्नेलका रुपमा परिचय बनाएका प्रभुराम शर्मा २०२० पुष २१ मा काठमाडौँमा जन्मेका हुन् । काठमाडौको सीतापाइला-छाउनी स्थायी ठेगाना भएका शर्माले पूरानो गोरख गणबाट सैनिक अधिकृतका रुपमा सेना प्रवेश गरेका थिए ।
३७ वर्ष लामो सैनिक सेवामा उनले गुल्म, गण, बाहिनी र पृतनामा काम गरेका छन् । जंगीअड्डामा सैनिक सचिव, भर्ना छनौट, नीति तथा योजना, सह–बलाध्यक्ष, युद्धकार्य, सम्भाररथी, बलाध्यक्ष र बलाधिकृत रथीको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव उनमा रहेको छ । त्यसैगरी, पृतनापतिका रुपमा भने उनले हेटौडमा कमाण्ड सम्हालेका थिए । ‘उहाँ निकै भद्र हुनुहुन्छ सैनिकहरुको मर्म बुझने अधिकारी हो, अपेक्षा गरौं उहाँको समयमा सेनाले थप नयाँ उचाई प्राप्त गर्नेछ’, उनलाई नजिकबाट चिन्ने एक सैनिक अधिकारीले भने ।
२० बेसिकका सैनिक अधिकृत शर्मा अमेरिकाको नियर इस्ट साउथ एसिया सेन्टर (नेसा) र एसिया प्यासिफिक सेन्टर फर सेक्युरिटी स्टडिज (एपीसीएसएस)ले संचालन गरेको विभिन्न सेमिनार र कोर्समा सहभागी भएका थिए । त्यसका साथै थाइल्याण्ड तथा पाकिस्तानबाट उनले प्रतिरक्षा सम्बन्धी तालिमसमेत हासिल गरेका छन् । उनी बंगलादेशका सैन्य सहचारी समेत थिए  । अन्य जर्नेल जस्तो पब्लिक फिगर त होईनन् तर उनलाई ‘म्यान इन एक्सन’ टाईपको व्यक्तिका रुपमा सेनाभित्र रुचाइएका मान्छे हुन् ।
उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट इतिहासमा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने भारतबाट नेशनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) को तालिम र अमेरिकामा पनि सैन्य शिक्षा हासिल गरेका अधिकारी हुन् । उनी सुप्रबल जनसेवाश्री पदकबाट सम्मानित भइसकेका छन् । उनी आफ्ना सहकर्मीहरुसँग घुलमिल हुने र सिपाहीहरुसँग समेत सौहार्दरुपमा प्रस्तुत हुने स्वभावको रहेको एक सैनिक अधिकारीले जानकारी दिए । सरल स्वभाव भएका शर्मा बाैद्धिक हिसाबले पनि अब्बल मानिन्छ । शर्माले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका क्रममा पूर्वी टिमोरमा गुल्म र कंगोमा गणको अन्तर्राष्ट्रिय कमाण्ड गरेका छन् । उनी भारतमा भएको नेपाल भारत द्विपक्षीय सल्लाहकार समूहको भेलामा समेत सहभागी भएका थिए ।
सेनामा युद्धकार्य महानिर्देशनालय (डीजीएमओ) प्रधानसेनापति बन्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण खुड्किलो हो । सैन्य अपरेसन र सैनिक गुप्तचर संयन्त्र यही महानिर्देशनालय अन्तर्गत रहन्छन । (अहिले भने सैनिक गुप्तचर महानिर्देशनालय नै स्थापना भएको छ।) सामान्यतः प्रधानसेनापतिको लाइनमा रहेकाबाहेक अन्य जर्नेलले डीजीएमओकाे नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदैनन् । कतिपय त प्रधानसेनापति बन्नेले नै पनि यो अवसर पाउँदैनन् । छत्रमानसिंह गुरुङ, राजेन्द्र क्षेत्री र पूर्णचन्द्र थापाले प्रधानसेनापति बन्नुअघि यो महानिर्देशनालयको नेतृत्व गर्न पाएनन् । तर, शर्मा पूरा अवधि डीजीएमओ प्रमुख (महानिर्देशक) भए । त्यसकारण शर्मा निकै भाग्यमानी जर्नेल मानिन्छन् ।
नेतृत्वमा हुनुपर्ने मिसन
कुनै पनि अधिकारीहरुले कमाण्ड गर्ने बेलामा उसको भिजन र मिसनबारे संगठनमा स्पष्ट गराउनुपर्छ भनिन्छ । मिसन २०३० को भिजन लिएर अगाडी बढेका हालका प्रधानसेनापति थापाको कार्यकालमा केही सवल पक्षहरु भएता पनि उनी विवादबाट मुक्त भने रहेनन् । कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरिदमा हात हालेपछि नेपाली सेना विवादमा तानिएको थियो । तर नेपाली सेनाले पछि खोप खरिद प्रक्रियाबाट हात झिकेको थियो ।
साथै तात्कालिन रक्षामन्त्रीसँगको चुलिदो विवादका कारण समेत नेपाली सेना विवादमा तानिएको थियो । सेनासँगको विवादकै कारण तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरेको थियो । जसका कारण शर्माका अगाडि बदलिएको परिस्थितिमा राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध समधुर बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती रहँदा रहँदै पनि नेपाली सेनालाई लागेको ठेकेदारी अभियोगलाई पनि विस्तारै विस्तारै मत्थर बनाउनुपर्ने मिसन देखिन्छ ।
अहिले काठमाडौं–तराई् मधेश द्रुतमार्गमा प्रधानसेनापति थापाले आफ्ना नातेदारको दबावमा प्रतिस्पर्धा बिना नै चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आरोप छ । द्रुतमार्गमा थापाले राम्रो फाइदा लिएको बताइएपनि त्यसको पुष्टि हुने आधार भने छैन । थापाले आफ्नो कार्यकालमा द्रुतमार्ग परियोजना पूरा गर्ने घोषणा गरेपनि खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन् ।
विवादमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको परियोजनालाई शर्माले कुन रुपमा अघि बढाउन चाहेका छन् र कस्ता व्यक्तिलाई कमाण्ड दिन्छन भन्ने पनि हेर्न बाँकी नै रहेको छ । सैनिक संगठनभित्र सुशासनका नाममा सेनापतिले गरेका जथाभावी कारवाहीले सेनाभित्र काम गर्ने वातावरण बिग्रिएको छ । त्यसले सेनाको आन्तरिक एकतामा समेत असर पुग्ने काम भएको सेनाकै केही अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । सेनाभित्र विग्रिएको काम गर्ने वातावरणलाई शर्माले कसरी नियन्त्रणमा ल्याउँछन् भन्ने विषयप्रति समेत सबैको चासो रहेको छ ।
उच्च मनोबलसहितको कटिबद्ध सैनिक फौज निर्माण गर्नुपर्छ : प्रधानसेनापति शर्मा
नेपाल र भारतका सेनाको संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु
क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापालाई सहादत प्राप्त गरेको ४३ वर्षपछि पदक
सैनिक कूटनीतिक परराष्ट्र नीतिकै एक हिस्सा : प्रधानसेनापति शर्मा
वर्ल्डलिङ्कले ल्यायाे दशैँ अफर, दोब्बर स्पिड अनि २० हजार बराबरको…
अरुण भ्यालीको हाइड्रोपावरको सर्वाधिक १० करोड ७८ लाख बराबरको शेयर…
२० निर्जीवन बीमा कम्पनीले गरे करिब ३ अर्ब बीमा शुल्क…
चितवन कांग्रेसको पालिका अधिवेशन : देउवा र पौडेल पक्षका तीन-तीन, एक तठस्थ
इपिएल क्रिकेटमा आज दुई खेल : अफ्रिदी अन्तिम खेल खेल्दै
प्रदेश २ मा प्रहरी आफै तस्करीमा लागेपछि आईजीपीको अनुसन्धान शुरु
काठमाडाैं विश्वविद्यालयले जित्यो पहिलो ‘नीति सम्मान’
नक्कली नोटको कारोबारीलाई सर्लाही प्रहरीले छाड्ने बारा प्रहरीले पक्राउ गर्ने
साउनदेखि प्रहरीमा सईसहित ११ जना सम्पर्कविहीन
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तीन सयले बढ्यो
लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनको ३० प्रतिशत भाडादर बढाएर अग्रिम टिकट…
नेपालको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रको प्रयास प्रशंसनीय :…
आज विश्व पर्यटन दिवस : अनि नेपालले आधुनिक विश्वमा पर्यटकीय…
आईएमएस् लिटिल स्माइलस्को दशैं अफर सार्वजनिक
बजारमा आज सुनको मूल्य स्थिर !
लमजुङ कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी, व्यवस्थापनमा समस्या
दुर्घटनाबाट बच्यो बुद्ध, अन्ततः त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै अवतरण
टिपरको ठक्करबाट चालकको मृत्यु, टायर बालेर अवरुद्ध राजमार्ग अवरुद्ध
विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषधसहित पक्राउ
निर्माणाधीन घरबाट लडेर युवकको मृत्यु